Photos: Beautiful Mal Myanmar @ Physical Beauty Contest 2011, Yangon - Collection2| Myanmar Model Girl and Supermodel Photos
Photos: Beautiful Mal Myanmar @ Physical Beauty Contest 2011, Yangon - Collection 2
Here are wonderful photos of Myanmar Physical Strength and Physical Beauty Contest 2011 which was held on 31 January 2011 at MCC Hall, Yangon. These are the photos of Beautiful Myanmar Girls (Mal Myanmar) who entered for the Physical beauty contest.
မြန်မာနိုင်ငံ ကာယဗလနှင့် ကာယအလှ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးစီးပြီး ဇန်န၀ါရီလ (၃၁) ရက်နေ့က ရန်ကုန် MCC ခန်းမမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မောင်မြန်မာ၊ မယ်မြန်မာ ပြိုင်ပွဲ မှ မယ်မြန်မာ တွေရဲ့ အလှပုံရိပ်တွေ ပါ။
SexyFebruary 2, 2011 at 8:04 AMအက်ဒမင်တွေကို ကျေးကျေးတင်ပြီးရင် တင်တယ်ဗျာ အဲဒါကြောင့်လည်း နေ့တိုင်းကို ဝင်အားပေးနေတာ။ ပုံတွေကြည့်ပြီးမှ မြန်မာတွေရဲ့အလှက မြန်မာလို့ဝတ်မှ ပိုထွက်တာ အဲ ပိုလှတာ တွေ့ရတယ်ဗျာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ ဟဟိReplyDeletesuFebruary 3, 2011 at 10:00 PMkorean actor, actress lookalike toe tatamyaramyar gyi ko kaung par tae, dar ka ma myanmar girls twe yaeahla pop, kaung par taeReplyDeleteAdd commentLoad more...